Karnalikhabar » आज चन्द्रग्रहण, ग्रहणको फल कुन राशीलाई कस्तो ? आज चन्द्रग्रहण, ग्रहणको फल कुन राशीलाई कस्तो ? – Karnalikhabar
आज चन्द्रग्रहण, ग्रहणको फल कुन राशीलाई कस्तो ?
प्रकाशित मिति :2017-08-07 02:41:11
काठमाडौं – ग्रहणको फलबारे केहीलाई विश्वास लाग्दैन । तर ग्रहणमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन र कुन राशीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर सोधीखोजी गर्नेहरु पनि धेरै हुन्छन् ।
ज्योतिषीय विधान अनुसार सोमबार राति खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएकाले दिउँसो २ बजेदेखि नै भोजन गर्नु हुँदैन । तर बिरामी, बालबालिका र बृद्धबृद्धाले भने खान हुन्छ । ‘ग्रहणको समयमा वातावरणमा नकारात्मक उर्जा प्रवाह हुने र त्यसले स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भएकाले यस्तो बेला खान हुँदैन भनिएको हो’ ज्योतिष बलराम उपाध्याय खकुरेलले भन्नुभयो ।
यस्तै राशी अनुसार ग्रहणको प्रभाव फरक हुने पनि ज्योतिषहरु बताउँछन् । ज्योतिषहरुका अनुसार मकर राशीको श्रवण नक्षत्रमा चन्द्रग्रहण पर्छ । त्यसैले मकर राशीका व्यक्तिले सोमबारको चन्द्रग्रहण अवलोकन गर्न नहुने ज्योतिषको भनाई छ ।
ज्योतिषका अनुसार मेष, धनु र सिंह राशी भएकालाई ग्रहण अवलोकन गर्नु राम्रो मानिन्छ । मकर, कन्या, वृष, मिथुन, कुम्भ र तुला राशीका लागि ग्रहणको फल राम्रो नभएको ज्योतिषको भनाई छ । ज्योतिषका अनुसार मीन, कर्कट र वृश्चिक राशीकालाई भने यो ग्रहण शुभ छ ।
तीजको अघिल्लो दिन सुनको मुल्य घट्यो
श्रीमतीमा यी ४ गुण छन् भने, तपाइँ भाग्यशाली